Famolavolana fitaovana: Jery amin'ny famolavolana tranonkala ankehitriny. Famoronana an-tserasera
Fran Marin | | mpanakanto, Famolavolana tranonkala
Efa ho roa taona lasa izay no nivoaran'ny Google ary nanambara tao amin'ny kaonferansa Google I / O ny Material Design ho toy ny fitsipika famolavolana izay hampiharina ary na dia nifantoka tamin'ny famoahana atiny tamin'ny rafitra fiasa Android aza izy io tamin'ny voalohany, dia natao hanjary fironana amin'ny tranonkala sy amin'ny sehatra rehetra izany, zavatra azontsika hamafisina anio. Na dia niresaka an'io aza izahay indraindray, ny tena marina dia tsy nijanona nijery an'ity lalina ity izahay, ka anio dia hodinihintsika izao ny toro lalana sy ny mampiavaka azy indrindra.
Inona avy ireo toetra mampiavaka ny famolavolana fitaovana? Inona no ifandraisany amin'ny hetsika Flat Design?
1 Inona no holazaina momba io fironana amin'ny famolavolana tranonkala io?
1.1 Order, mazava, mora vakiana
1.2 Jiro sy zava-misy
1.3 Ny fihetsiketsehana no fitaovana mahomby indrindra hisarihana ny sain'ny olona sy hitarihany ny mpijery
1.4 Rhythm, filaminana, fiteny
1.5 Kaody tsy voafetra
1.6 Ny famolavolana fisaka dia tsy mitovy amin'ny Design Material
Inona no holazaina momba io fironana amin'ny famolavolana tranonkala io?
Ny anarany dia avy amin'ny heviny azo ampiharina indrindra, ny zavatra na ny fitaovana dia mila alamina sy voarindra arak'izay azo atao ary hifantoka amin'izany ianao. Ity hetsika ity dia mikatsaka mihoatra ny fahafaha-manao rehetra, ny ergonomika ary ny fahaizana mamoritra sy manamora ny fananganana tranokala. Saingy tsy ny refin'ny habaka ihany no hipetraka toerana manan-danja, fa ny an'ny fotoana koa, satria ankehitriny ny singa dia hibodo toerana sasany amin'ny fotoana sasany, izany hoe, ny dynamism koa dia ho singa fototra. Ho fanampin'izany, ireo antony ireo dia tsy maintsy iharan'ny torolàlana amin'ny lozisialy sy ny lojika, izay miafara amin'ny fitadiavana ny realisme sy ny fanehoana toerana ara-batana, raha ny tena izy dia mitaky ny lalàn'ny fizika ary miaraka amin'ireo singa (sary, bokotra, takelaka ...) tsy afaka mifampita satria manana lanjany lehibe sy hakitroky ny mason'izy ireo, fa ny zavatra hataon'izy ireo dia ny mifanindry.
Order, mazava, mora vakiana
Ireo fotopoto-pitsipika rehetra ireo dia nalaina avy amin'ny fomba fitantanana sy fizarana ireo singa sary, ao anatin'izany ny typografia, izay ho vahaolana mazava azo vakina, ny firafitry ny lahatsoratra dia ho mahazatra sy ranoka, hierarchy hita maso entanin'ny fampiasana bebe kokoa na ny feo mahery vaika kokoa mamorona fifanoherana izay hozongozonina ihany koa amin'ny alàlan'ny habe sy filaminana.
Jiro sy zava-misy
Ny lojika dia miseho ambonin'ny zava-drehetra amin'ny fampiasana ny jiro sy ny fitantanana ny jiro sy ny aloka. Ny jiro dia famantarana lehibe amin'ny akaiky, ny maha-zava-dehibe ary ny toe-javatra, ka izay no antony hanjary fitaovana lehibe hitaomana ny ambaratongam-pitenenana noresahinay. Ankehitriny, ny bokotra, ny sary ary ny singa rehetra dia hanana aloka izay hanondro ny halehiben'ny akaiky ary hanampy antsika hametraka ny tenantsika eo amin'ny sehatry ny tranonkala.
Ny fihetsiketsehana no fitaovana mahomby indrindra hisarihana ny sain'ny olona sy hitarihany ny mpijery
Ho mazava ho azy, misy sary ary manazava eo imason'ny mpampiasa azy ny fiteniny. Rehefa misafidy safidy na fitaovana dia hanatona antsika izy io, hanitatra ny refy ary ny mifamadika amin'izany rehefa tsy mampiasa azy intsony isika. Ary koa, ny zavatra iray dia hanova loko na blink raha toa ka mila mahasarika ny saintsika tokoa izany.
Rhythm, filaminana, fiteny
Aza adino fa lalina any am-pitenenana isika amin'ny fomba firesaka. Izahay dia mamaky ireo loharano atolotry ny famolavolana tranonkala ary noho izany ny masontsivana maneho hevitra ara-teknika rehetra dia misy dikany: Avy amin'ny filaharan'ny fisehoana, ohatra, ny sary ary avy eo ny bokotra mitsingevana, mankany amin'ny hafainganam-pandehan'izy ireo, amin'ny lalana mankaiza ataony izany ary amin'ny fiafarany no ihetsehany. Zava-dehibe izany rehetra izany satria tsy ny mpampiasa ihany no nanondro izay niavian'ny fampahalalana, fa koa nanamora ny dia, namboarina ireo singa mba hahatonga ny fizotran'ny famakiana ho mora, mora ary mahafinaritra. Andiany ifotony ny fanentanana sy ny dinamika tsy azo lavina.
Kaody tsy voafetra
Ireo fitsipika na fari-pitsipika rehetra izay dinihinay ireo dia noforonina sy novolavolaina hampiharina amin'ny salantsalany sy sehatra rehetra, na inona na inona toetrany sy ny refin'ny efijery asehony. Avy amin'ny telefaona finday, tablette na solosaina. Ny fanohanana sy ny toerana rehetra mety hitranga dia manohana an'ity fiteny hita maso ity ary raha ny marina dia ny fifindrana sy ny mifanentana no iray amin'ireo singa ilaina.
Ny famolavolana fisaka dia tsy mitovy amin'ny Design Material
Na dia mizara hevitra marimaritra iraisana aza izy ireo, toy ny fanoloran-tena amin'ny minimalism be feo indrindra, dia misy ihany koa ny tsy fitoviana lehibe eo amin'ireo kaody roa tonta. Na izany aza, tsy mifanentana izy ireo ary azo atambatra tsara mba hahazoana ny famaranana tsara indrindra, fa hiresaka momba izany isika amin'ny lahatsoratra manaraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Famolavolana fitaovana: Jery amin'ny famolavolana tranonkala ankehitriny
Yerko Alfaro dia hoy izy:
Fran, hitako fa tena nahaliana ny publication nataonao. Tsy dia misy fampahalalana amin'ny teny espaniola momba an'io lohahevitra io. Raha izany, raha mahaliana anao dia manana ny fandikan-teny Espaniola ny famaritana Material Design ao amin'ny bilaogiko aho. Tahaka anao koa, ny mahaliana ahy dia ny hahatratra ny olona betsaka indrindra ny fampahalalana mba hahafahan'izy ireo manararaotra azy.
Valiny tamin'i Yerko Alfaro
Lahatsoratra tena tsara !! Tsy nahalala na inona na inona momba ny "Design Material" aho fa momba ny "Flat Design", raha ho an'ny tsiro manokana ihany. Hiezaka hanaraka ny sasany amin'ireo torohevitra aho.